Indlela yokubhala umbongo: iingcebiso ezisisiseko kunye namacebo okufumana | Uncwadi lwangoku
Encarni Arcoya | 09/09/2021 17:00 | Imibongo
Ukubhala imibongo akukho lula. Kukho abo banendawo engakumbi, kwaye bayifumene iyinto enzima ukuyenza ifezeke. Kodwa ukuba uyafuna ukufunda Indlela yokubhala umbongoKukho iingcebiso ezithile esinokukunika zona eziza kukunceda uqiniseke ukuba ayongxaki.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi izitshixo zokubhala imibongo? Ungabhala njani umbongo wothando, umnqweno okanye intelekelelo? Ke ungathandabuzi, apha ngezantsi sikubonisa yonke into ekufuneka uyazi.
1 Bhala umbongo, yintoni ekufuneka uyazi ngaphambi kokuba uyenze?
1.1 Ezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe
2 Iingcebiso zokubhala umbongo
2.1 Yazi ukuba uza kubhala ntoni na ngalo mbongo
2.2 Ukufunda ulwimi olunengoma
2.3 Cacisa malunga nomyalezo kunye nenjongo oyifunayo
2.4 Sebenzisa izikweko ukuba uyazifuna
2.5 Lawula yonke imiba yombongo
2.6 Lumkela iimpawu zokubhala
2.7 Wakuba ugqibile, funda umbongo
2.8 Funda imibongo
Bhala umbongo, yintoni ekufuneka uyazi ngaphambi kokuba uyenze?
Phambi kokumiliselwa ekubhaleni umbongo, kukho iikhonsepthi ezithile ezisisiseko ongenakuzibetha ngoyaba, kuba ngapha koko ziyimbongo. Enye yezo ngqondo inento yokwenza nezinto zombongo. Ngaba uyazi ukuba yenziwe ngantoni?
Los Imibongo yenziwe ngezinto ezintathu kubalulekile:
Ivesi, emgceni ngamnye onombongo.
Isitanza, eneneni siseti yeevesi ezinokufundwa ngendlela enye kwaye zikhangeleke njengomhlathi.
Imvano-siphelo, yiyo le nto iivesi zingqinelana. Ngoku, ngaphakathi kwesicengcelezo unokufumana isimamisi, xa kuphela izikhamiso zingqinelana; Imvumelwano, xa izikhamiso kunye neqabane livumelana; Kwivesi yasimahla, xa ungangqoli isingqisho nayiphi na ivesi (le yeyona ikhoyo ngoku). Umzekelo unokuthi "Nangona inkawu inxiba isilika / ukuhlala okuhle". Njengoko ubona, ukuphela kwendinyana kungqinelana nenye, kwaye oko kubizwa ngokuba yimvano-zandi. Kwelinye icala, ukuba sithi «Xa kwafika ezinzulwini zobusuku / kwaye uMntwana wavele walila, / lavusa ikhulu lezilwanyana / kwaye isitali saphila ... / basondela / bazolulela kuMntwana / ngeentamo zabo ezilikhulu , ukulangazelela / njengehlathi elishukunyiswayo. Ukuba uyahoya, lo mbongo nguGabriela Mistral (Romance of the stable of Bethlehem) usinika njenge-assonance Child, uphile kwaye uyashukuma; kanye xa bevuka kwaye besondela. Ziphela ngezikhamiso, kodwa hayi ngoonobumba.
Ezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe
Enye yeekhonsepthi ezisisiseko sendlela yokubhala umbongo yile iimetrikhi. Eli ke lilonke lilungu lamalungu kwivesi kwaye kubaluleke kakhulu kuba ivesi nganye kufuneka inamalungu amaninzi ahambelana negama lokugqibela. Ukuba elo gama li:
Acute: isilayidi enye.
Llana: hlala apho unayo.
Esdrújula: isilabhili esinye sithathiwe.
Ewe banako ukunikwa iilayisensi zemibongo njenge-synalepha, i-syneresis, i-hiatus, njl. ezinokutshintsha imitha yevesi okanye wonke umbongo.
Okokugqibela, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ulwakhiwo. Oko kukuthi, indlela iivesi ezahlukeneyo eziza kuba nemvano-siphelo kwaye zakhiwe ngayo. Kufuneka kuthiwe ukuba kukho iindidi ezininzi, kwaye nganye inokuziva ikhululekile ngakumbi okanye enye.
Iingcebiso zokubhala umbongo
Xa ujongene nephepha elingenanto, kufuneka ucace gca ukuba ubhala ntoni na, kwaye oko kuhamba ngoku kulandelayo:
Yazi ukuba uza kubhala ntoni na ngalo mbongo
Ukubhala umbongo wothando akufani nombongo onenzondo. Kananjalo akufani nokubhala umbongo osengqiqweni kunombongo omnandi, okanye onomxholo othile. Ngaphambi kokumiliselwa, kuya kufuneka uyazi ukuba ufuna ukubhala ngantoni, kuba ukubeka amabinzana anemvano-siphelo ngaphandle kokuqhubeka kwenziwa nangubani na, kodwa isingqisho kunye nokuxelela into sele kunzima ngakumbi.
Ukufunda ulwimi olunengoma
Imibongo ayisiyo inoveli apho ungandisa khona into oyifunayo, kwaye ayilo bali lifutshane apho ubalisa ibali elinamagama ambalwa. Kumbongo kufuneka wenze amagama ngokwawo abe mahle, kungekuphela ngenxa yamagama, kodwa nangenxa yesingqisho, isandi ...
Cacisa malunga nomyalezo kunye nenjongo oyifunayo
Kubalulekile ukuba, ukongeza ekwazini ukuba ubhale ngantoni, gcina engqondweni ufuna ukudlulisa ntoni, yintoni injongo yokubhala lo mbongo, okanye ufuna ukuba umfundi azive xa ekufundela.
Sebenzisa izikweko ukuba uyazifuna
Izikweko zi uphawu lwesibongo, kwaye bakhonza ukuluhombisa ulwimi. Ngoku, hamba kwezi sele zisaziwa kwaye wonke umntu wenza kwaye azenzele ezakho. Kulungile ukuzinza kubo, kodwa "iiperile zombethe" okanye "ukuthintela inkanuko" sele zisetyenzisiwe kakhulu, ke azizukubonwabisa abaphulaphuli bakho.
Lawula yonke imiba yombongo
Sithetha ngokuthe ngqo malunga nemvano-siphelo, imitha, inani leevesi, ulwakhiwo ... Phambi kokuba wehle, zimisele ukuba ufuna ukuba yintoni lo mbongo ukuze unamathele kuwo. Ke, unokugxininisa ngakumbi kwinxalenye, okanye uxele into oyifunayo kumbongo ngokungathi inesiqalo, isiqu kunye nesiphelo.
Lumkela iimpawu zokubhala
Ukuba ubhala Umbongo awuthethi ukuba iimpawu zokubhala akufuneki zihlonitshwe. Nangona kunokubakho ubhetyebhetye ngakumbi, inyani kukuba kufuneka uzisebenzise, ​​ngakumbi ukunika ikhefu phakathi kweevesi kunye nezitanza.
Ngaphandle koko, ungafumanisa ukuba umyalezo wakho umde kangangokuba umfundi akayikhumbuli nokuba uqale njani, okanye uyeke ukuphefumla kwaye usike intsingiselo iyonke yesihobe.
Wakuba ugqibile, funda umbongo
Yeyona ndlela ilula yokwenza jonga ukuba ngokwenene lo mbongo "unobomi." Yintoni leyo? Ewe, imalunga nokwazi ukuba sisandi na, ukuba sinesingqisho, imvakalozwi, intsingiselo kwaye ukuba ikwenza uvuye into. Ukuba xa uyifunda kubonakala ngathi ayinabomi okanye ukubamba, ungatyhafi uzame kwakhona.
Into ebalulekileyo nento ekufuneka uyizamile kukuxela kule migca imbalwa yonke into oyifunayo, kwaye igama ngalinye lithwele umthwalo wokuziva yiyo loo nto yenza iseti yonke ibe "yimbongi".
Ingcebiso yokugqibela esikunika yona yile funda yonke into enento yokwenza nohlobo loncwadi lwemibongo. Olona hlobo kuphela lokuphucula kwimibongo yakho kwaye ube ngumfundi kwisifundo kukufunda ngalo. Ke ngoko, akonelanga ukuba ufunde nje imibongo kwaye ubone ukuba abanye ababhali bamandulo kwaye ngoku benza imibongo, kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba zeziphi iziseko, imbali kunye notshintsho olwenzekileyo ekufumaneni indlela yakho.
Ngaba unesibindi sokubhala umbongo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Imibongo » Indlela yokubhala umbongo
UGoretti Irisarri noJose Gil Romero. Udliwanondlebe nababhali beLa traductora